बहसः माधव नेपालको रक्सी–बियर नखाऊ भन्ने अभिव्यक्तिले उब्जाएका प्रश्न : RajdhaniDaily.com sharethis
हालै गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफूनिकटका पत्रकारहरूको एक कार्यक्रममा उनीहरुलाई रक्सी नखाने चेतावनी दिएको आमसञ्चारमा सार्वजनिक भयो । उनको अभिव्यक्ति’bout तथ्यगत रूपमा केही भन्नैपर्ने देखिएको छ । यदि कुनै पनि दलको मुख्यनेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेको जिम्मेवार व्यक्तिले हठात् मदिराजन्य वस्तु नखाऊ भन्न सुहाउने विषय होइन ।
भारतको विहारमा अघिल्लो विधानसभा निर्वाचनमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले मदिरा प्रतिबन्ध लगाउने विषयलाई निर्वाचनमा एजेन्डा बनाएका थिए । नेता नेपालले निर्वाचनमा नितिश कुमारकै मोडल अपनाए भने कसैले केही भन्न सक्दैन ।
कि त राजनीतिक एजेन्डा बनाएर चुनावमा गएपछि त त्यस्ता विषयवस्तु’bout जनअनुमोदन लिन सकिन्छ नि! विहारको चुनावमा नितिशकुमार मदिराजन्य वस्तुमाथि बन्देज लगाउने नारासहित चुनावमा होमिएका थिए। उनले चुनाव जितेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कदम चालेका पनि थिए । अहिले आएर उनको उक्त कदम नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले मदिराजन्य वस्तुमाथि नियन्त्रण तथा बन्देजको माग गर्न पाउँछन्। तर, प्रधानमन्त्रीजस्तो पदीय जिम्मेवारी सम्हालेको व्यक्तिले मुलुकको आर्थिक स्रोत पहिचान नगरी मदिरालाई रोक्दा त्यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने असर’bout ख्याल गरिएको पाइएन।
रक्सीलाई व्यवस्थित गर्ने अनि कानुनी मापदण्ड बनाउने भन्ने कुरा जायज हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मदिराजन्य पदार्थको बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन केही पहल थालेका थिए। डा. भट्टराईको पालामा रक्सी पसल छुट्टै हुनुपर्ने, खोल्नको लागि निश्चित समय तोकिनुपर्नेलगायत प्रावधान राख्ने’bout छलफल भएको थियो।
ब्रिटनमा १८ वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिलाई पसलेले रक्सी बेच्दैन र शंका लाग्यो भने आइडी लेऊ भन्छ। भारतमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने गरी रक्सी क्रेताले फर्म नै भर्नुपर्छ। रक्सी तथा मादकपदार्थ’bout संसारमा सरकारहरूले जनस्वास्थ्य कार्यालयका सरसल्लाह पालना गरेको देखिन्छ। मदिराजन्य वस्तुमा सरकारले वर्षैपिच्छे कर पनि बढाएको देखिन्छ।
नेपाल सरकारले पनि यस्ता रिसर्चका लागि नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिललाई रकम दिँदै आएको छ । यस्तो प्रावधानहरु चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ । एकपटक प्रधानमन्त्री चलाइसकेका नेता नेपाललाई कि चाहिँ केही थाहा छैन भन्ने बुझ्नुप¥यो, होइन भने यो त बचपना हो नि! जस्तो कि सरकारले थाहा हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल हुने पदार्थहरूलाई खुला राखेको हुन्छ ’cause त्यो राजस्वको स्रोत हुन्छ।
एमाले कैलाली अधिवेशन : ओली समूहमै ध्रुवीकरण
बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष खड्का कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा पराजित
एमाले कैलालीको अधिवेशन स्थलमा तोडफोड
सुजन प्रदेशस्तरीय आर्चरी च्याम्पियन
डाेरमणीले दिए राजीनामा अष्टलक्ष्मी बागमती प्रदेशकाे मुख्यमन्त्री
सुनिताको स्वामीकी प्यारी सार्वजनिक
एमालेकाे कार्यदल बैठक अन्योलमा